Football Khabar » युरोपको ‘ड्रिम टिम’ सार्वजनिक, को–को परे ?
युरोपको ‘ड्रिम टिम’ सार्वजनिक, को–को परे ?
सिजन २०१८÷१९ को युरोपियन फुटबलको ‘ड्रिम टिम’ सार्वजनिक गरेको छ । इटालियन युभेन्टसका क्रिस्टियानो रोनाल्डो तथा स्पेनिस बार्सिलोनाका लिओनल मेस्सी सो टिममा परेका छन् ।
हरेक सिजनको अन्त्यमा सिजनभर गरिएको प्रदर्शनका आधारमा वर्षको उत्कृष्ट टिमलाई ‘ड्रिम टिम’ नाम दिएर सार्वजनिक गरिन्छ । फुटबलको चर्चित वेभसाइड ‘गोल’ले युरोपका शीर्ष पाँच लिगबाट ड्रिम टिम सार्वजनिक गरेको हो ।
जसमा रोनाल्डो र मेस्सी दुवै परेका छन् । ड्रिम टिमको फरवार्ड लाइनमा रोनाल्डो र मेस्सीसँग म्यानचेस्टर सिटीका सर्जियो अगुइरो परेका छन् ।
यता, ड्रिम टिमको मिडफिल्डरमा चेल्सीका इडेन हजार्ड, सिटीका बर्नान्डो सिल्भा र बोरुसिया डर्टमुन्डका विसल रहेका छन् ।
त्यस्तै, डिफेन्डरतर्फ लिभरपुलका रोबर्टसन, भर्जिल भान डिज्क र एलेक्स आर्नोल्ड तथा बार्सिलोनाका जेरार्ड पिके रहेका छन् । गोलकिपर भने एथ्लेटिको मड्रिडका जोन ओब्लाक परेका छन् । ‘गोल’ ले युरोपका टप–५ लिगका उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई लिएर ड्रिम टिम बनाएको हो ।
प्रकाशित मिति १३ जेष्ठ २०७६, सोमबार १५:४१